फेसबुक मेसेन्जरबाट युवतीसँग यौनप्रस्ताव राख्नेलाई लाग्यो हतकडी, अब यसरी चल्छ डण्डा ! «
फेसबुक मेसेन्जरबाट युवतीसँग यौनप्रस्ताव राख्नेलाई लाग्यो हतकडी, अब यसरी चल्छ डण्डा !
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २३:१६
फेसबुक मेसेन्जरमा अश्लील भिडियो तथा फोटो पठाएर यातना दिएको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका– ६ बस्ने सुरेन्द्र नेपालीले एक युवतीलाई फेसबुकको मेसेन्जरबाट अश्लील भिडियो तथा फोटा पठाएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
एक महिलाको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालीले मेसेन्जरबाटै युवतीसँग यौन प्रस्ताव राखेका थिए । पक्राउ परेका नेपालीलाई पर्वत प्रहरीले काठकमाडौं प्रहरीमा पठाएको छ ।
५० लाख दिनुस् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मारिदिन्छु भनी फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने युवकलाई हतकडी, अब हुन्छ यस्तो रामधुलाई !
५० लाख दिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मारिदिने भन्दै फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । फेसबुकको दुरुपयोग गरी ५० लाख दिएमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मारिदिन्छु भनेर कमेन्ट गर्ने सिन्धुपाल्चोकको लिसाँखु गाउँपालिका-२ घर भइ हाल बानेश्वर बस्ने ३४ वर्षीय लालबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गरी एउटा अनलाइनमा ’पचास करोड दिनुस् म मोदीलाई मारी दिन्छु’, भन्‍ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा उनले सलिम योञ्जन तामाङ भाइ नामक फेसबुक आइडीबाट उनले कमेन्ट गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महाशाखाले प्रमलाई नै मारिदिन्छु भनी तामाङले जनतामा भ्रम र त्रास फैल्याएकाले पक्राउ गरिएको जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोसः–
घुँडामा गोली हानेर काठमाडौँ प्रहरीले यसरी ढाल्यो ‘खुंखार डाँका’ विष्णु तामाङ ‘काले’ लाई !
हरीले काठमाडौंको टोखाबाट गोली हानेर ‘खुंखार डाँका’ विष्णु तामाङलाई निय्रन्त्रणमा लिएको छ । काले भनिने तामाङ प्रहरीको सर्वा्धिक खोजीको सूचीमा थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख सहकुल थापाले तामाङको दायाँ घुँडामा गोली लागेको जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार ६ वटा अपराधका घटनालाई लिएर उनको खोजी भइरहेको थियो । यसैक्रममा टोखामा रहेको सूचना पाएपछि प्रहरी टोली उनलाई पक्रन सोमबार बिहान ८ बजे गएको थियो ।
‘नियन्त्रणमा लिन गएको टोलीलाई उनले उल्टै हतियार देखाएर आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि आत्मरक्षाको लागि प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लिएको हो,’ थापाले भने ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका तामाङले पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्द र पूर्व डिआईजी विश्वराज सिंह शाहीको घरमा समेत लुटपाट गरेका थिए ।
यही कारण उनी ६ वर्ष कैद भुक्तान गरेर २०७२ सालमा रिहा भएका थिए । जेल सजाया भुक्तान गरेर निस्किएपछि पनि उनी अपराधमै संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले उनलाई ‘खुंखार डाँका’ भन्ने गरेको छ ।
दायाँ खुट्टामा गोली लागेर घाइते तामाङको बीर अस्पतालमा भइरहेको छ ।
घाँस काट्न गएका युवतीमाथि दुईजना प्रहरीले नै यसरी बलात्कार गरेपछि…
बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले दुईजना प्रहरी जवानमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मुद्दा चलाइएका प्रहरी जवान दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुनवलमा कार्यरत हुन्। घटना गत वैशाख १ गतेको हो।
गण नजिकैको जंगलमा घाँस काट्न गएका दुई युवतीमाथि प्रहरी जवानले छुट्टाछुट्टै बलात्कार गरेको आरोप छ।
घटना भएको एक महिनापछि मात्र पीडितले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक विरेन्द्र थापाले बताए।
घटना भए लगत्तै पीडित युवतीले केही नभनेको र केही दिनअघि मात्र जानकारी दिएकाले प्रहरी कहाँ उजुरी दिएको आफन्तले बताएका छन्। पीडित युवतीको उमेर २६ र १७ वर्ष छ।
प्रहरी जवानलाई सम्बन्धित कार्यालयले निलम्बन गरेपछि अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मुद्दा चलाइएकामा डडेल्धुरा, मास्माण्डु गाउँपालिका(८ का २५ वर्षीया प्रेम खड्का र दाङ,गडवा गाउँपालिका(४ का २३ वर्षीया पाटेश्वर यादव छन्।
उनीहरु दुवैलाई जर्बजस्ती करणीमा मुद्दा पक्रिया अघि बढाइएको नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिए।